Maamulka Somaliland oo qaxooti Soomaali ka soo cararay dalka Yemen u diiday inay ka degaan Dekeda Berbera – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamulka Somaliland oo qaxooti Soomaali ka soo cararay dalka Yemen u diiday inay ka degaan Dekeda Berbera
29th May 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Maamulka Somaliland ayaa is hor-taag ku sameeyay qaxooti Soomaaliyeed oo ka soo cararay colaada Yemen, kuwaasoo doon Markab ay shalay ku soo xiratay Dekeda Berbera, waxaana dadkan loo diiday inay cagta soo dhigaan Dekeda Berbera, dibna loogu celiyay markabkii ay saarnaayeen.
Markabkan ayaa dadkii la socday oo isugu jira dad u dhashay Yemen, dad ka soo jeeda Somaliland iyo dadka kale oo Koofurta Soomaaliyeed ka soo jeeda ayaa la bilaabay in la kala sooco, iyadoo dadkii Yemeniyiinta iyo kuwii Somaliland u dhashay loo ogolaaday, halka qaxootigii kale ee Koofurta Soomaaliya ka soo jeeda dib Doonta loogu celiyay.
Maareeyaha Dekeda Berbera ayaa sheegay inay dhaqan gelinayaan amarkii ka soo baxay Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland ee ahaa in aysan qaabileyn Qaxootiga Soomaalida ah ee aan deegaankooda u dhalan, waxayna tani keentay muran xoogan.
Qaar ka mid ah qaxootigii dib Doonta loogu celiyay oo u badnaa caruur iyo haween ayaa sheegay inay saddex cisho ku soo jireen badda, isla markaana aysan heysan wax ay cabaan, sidaas darteed haddii loo diiday inay soo caga dhigtaan Dekeda Berbera ay Badda isku tuurayaan.
Haweenka saarnaa Markabka oo caruur xanuunsanaya ay wateen ayaa ka dalbaday maamulka Somaliland in aysan dadka Soomaaliyeed kala takoorin, waxaana dadkan ay ka wal walsanaayeen go’aanka Somaliland ee loogu diiday inay galaan.
Sharciga Caalamiga ah ee qaxootiga ayaa dhigaya in qaxootiga aan la takoorin, waxaana tallaabada ay qaaday Somaliland ka carooday dad badan oo Soomaaliyeed, tiiyo qaxootigan Soomaaliyeed ee ka soo cararaya colaada Yemen ay dhibaatooyin heystaan.
Europe’s Refugee Problem, Then and Now
20-ruux oo ku geeriyootay dagaalo ka dhacay Xuduuda Itoobiya iyo Soomaaliya